यसकारण देखियो छवि–शिल्पाको सम्बन्धमा पूर्णविरामको संकेत, अब के होला ? – Jaljala Online
Posted on July 16, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
असार ३१, काठमाडौँ । पछिल्लो एक हप्ता नेपाली चलचित्रको बजार निर्माता छविराज ओझा र अभिनेत्री तथा उनकी धर्मपत्नी शिल्पा पोखरेलको झगडाले तताएको छ ।
यो खबर रामजी ज्ञवालीले कान्तिपुरमा लेखेका छन् । सामान्य भनाभनपछि सुरु भएको उनीहरूको झगडा यतिमाथि पुगेको छ कि अब शिल्पा छविको घर फर्किने सम्भावना छैन । छविको मनमा समेत आशा मर्दै गएको छ ।
छविराज र शिल्पाको बिहे भएको तीन वर्ष पुरा भएको छ । उनीहरूको बिहे २०७३ असार २९ मा भएको थियो । तर उनीहरुलेसँगै रहेर तेस्रो वैवाहिक वर्षगाँठ मनाउन पाएनन् । लगभग २५ दिनअघि घर छोडेकी शिल्पालाई वैवाहिक वर्षगाँठको अवसरमा उनका श्रीमान् छविराजले ‘हृयाप्पी थर्ड एनिभर्सरी’ भनेर म्यासेज पठाए, शिल्पाको मोबाइलमा ।
यति मात्रै होइन उनले म्यासेजमा आउनुस् बसौँ, विगतका कुराहरू बिर्सिएर नयाँ किसिमले जिन्दगीको सुरुवात गरौँ समेत भनेका छन् । तर, शिल्पाको रिप्लाई आएन । हिजो मात्रै उनीहरूको फोनमा कुराकानी भएको छ । कुराकानीमा छविले ‘तपाईँ भएको स्थानमै आउँछु, बसेरै कुराकानी गरौँ’ भने । तर, शिल्पाले ‘म भेट्न सक्दिन,मेरो वकिलले भेट्छ’ भनेर जवाफ फर्काइन् ।
मेरो बारेमा को बोल्छ ? जिन्दगीभर साथ दिन्छु भन्नुभएको थियो, अहिले यो के गरिरहनुभएको छ ?’ उनले भने, ‘सधौ तीनवटा बिहे भएका र अघिका बिहे फापेन भन्दैमा जहिले पनि मेरो गल्ती हुन्छ ?’ बिहेअघि तीनवर्ष डेटमा रहेका बेला सबै कुरा बुझेपछि बिहे बन्धनमा बाँधिएको बताउँदै उनले अहिले अनावश्यक रूपमा आरोप लगाएको बताए ।
५५ वर्षका छविराजले आगामी समय पनि शिल्पासँगै बिताउन चाहेका छन् । शिल्पासँग डिभोर्स भयो भने आगामी समयमा कोही कसैसँग पनि बिहे नगर्ने बताए । छविले यसअघि तीनवटा बिहे गरिसकेका थिए । शिल्पा चौथो श्रीमतीको रूपमा छविको घर भित्रिएकी थिइन् ।
नायिका शिल्पा पोख्रेलका श्रीमान तथा चलचित्र निर्माता छवीराज ओझाले आफूमाथि लगाएका आरोप झुट रहेको दाबी गरेका छन् ।
बैदेशिक रोजगारीको लागी यूएई जाने नेपालीलाई खुशीको खबर
Posted on November 4, 2019 Author Jaljala Online
कात्तिक १८, काठमाडौं । नेपाल र यूएईको संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लुसी)को पहिलो बैठकले दुई देशबीच भएको श्रम समझदारी (एमओयू) को कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ । नेपाली श्रमिकले पाउन सेवा सुविधाका विषयमा आइतबार र सोमबार दुई दिन नेपाल र यूएईका प्राविधिक कमिटिको बैठक काठमाडौंमा बसेको हो । बैठकमा ६ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व […]
भोली कार्तिक १ गते तापाईको भाग्यफल कस्तो छ ? पढ्नुहोस
भोली मिति २०७६ साल कार्तिक महिनाको पहिलो दिन १ गते शुक्रबार रहेको छ । मेष (मानसम्मानमा बाधा पुग्ने हुँदा बोली(व्यवहारमा सजग रहनुहोला। मिहिनेत गर्दा नियमित काम सम्पादन हुनेछन्। अवसर प्राप्त भए पनि उपलब्धि हातपार्न भने समय लाग्नेछ। अरूको भरपर्दा आफ्नो काम प्रभावकारी काम नहुन सक्छ। परिबन्धले समस्या निम्त्याउने हुँदा योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुहोला। आलोचकहरूलाई […]